Tags: job work hot job career jobs in yangon job in myanmar good job HR advice jobless keep empl
စိတ်ဓါတ်တက်ကြွနေသော ဝန်ထမ်းသည် အဖိုးတန်ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ရှာဖွေရန်ခက်ခဲလှသည်။ ဝန်ထမ်းများနှင့်ဆက်သွယ်မှုတွင် စိတ်ကျေနပ်မှုမရရှိကြခြင်းမှာ အရေးကြီးဆုံးအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ လေ့လာချက်များအရ အထက်အရာရှိနှင့် ကတောက်ကစ ရှိတတ်ကြသူများသည် အလုပ်လုပ်ရာတွင် မအောင်မြင်နိုင်ချေ (၈၀) ရာခိုင်းနှုန်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အထက်အရာရှိကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်နှင့်အလုပ်တွင်အောင်မြင်နေသောဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေရန် အဓိကအရေးပါသောအချက် (၅)ချက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ချီးမွမ်းခံရသည့်အခါ ဝန်ထမ်းများသည် ပိုမိုပျော်ရွှင်ပြီး ပိုမိုကြိုးစားလိုစိတ်ရှိတတ်ကြသည်။ အလုပ်ကိုရောက်သည်နှင့် မင်္ဂလာပါ ဟုနုတ်ဆက်ခြင်း ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစရှိသဖြင့် ငြင်သာစွာ လေးစားမှုရှိစွာဖြင့် ပြောဆိုတတ်ခြင်းသည် ဝန်ထမ်းများအား တန်ဖိုးထားခံရသည်ဟူသော အသိဝင်စေသည်။ ပိုင်ရှင် (သို့) အထက်အရာရှိတစ်ယောက် ဝင်လာသောအခါ ကောင်းမွန်စွာနှုတ်မဆက်ခြင်း၊ နှုတ်ဆက်မှု လုံးဝမရှိခြင်းတို့သည် ဝန်ထမ်းများအား စိတ်ခံစားမှုမကောင်းခြင်းဖြစ်စေသည်။
2. ပိုမိုသော အရာများအတွက် Credit ပေးပါ
သင့်ဝန်ထမ်းအလုပ်လုပ်သောနာရီပေါင်းကို လေ့လာထားပါ။ အလုပ်တွင် ကုန်ဆုံးသောနာရီပမာဏသည် သူ၏မိသားစုနှင့်ကုန်ဆုံးသောနာရီများထက် ပိုမိုနေပါက ဂျုတီချိန်ထက်ပိုမိုနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောရန်အရေးကြီးသည်။ ဝန်ထမ်းများအား အပြစ်ပြောရန်ရှာဖွေနေခြင်းထက် ကောင်းကွက်များကိုလည်း စဉ်းစားပြောဆိုပေးခြင်းသည် ကောင်းသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။
3. လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပျော်ရွင်မှုရရှိရန်တွန်းအားပေးပါ
အလုပ်ဟူသည် အလုပ်တခုတည်းသာမကပါ။ ဝန်ထမ်းများအတွက် ပွဲများစီစဉ်ပေးခြင်းသည် အလုပ်နှင့်မသက်ဆိုင်ပဲ အချင်းချင်းရင်းနှီးမှုရရှိနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သော ပွဲမဟုတ်ပဲ ဝန်ထမ်းများအား အသိအမှတ်ပြု၍ ဂရုတစိုက် ပွဲစီစဉ်ပေးခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။
4. မကြာခဏ ရှင်းလင်းစွာပြောဆိုဆက်ဆံမှုပြုလုပ်ပါ
ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းသည် ပတ်သတ်မှုတိုင်းအတွက် အရေးပါပါသည်။ သင့်ဝန်ထမ်းများသည် သင်လိုချင်သောအရာကို သေချာစွာသိရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ဝန်ထမ်းများပန်းတိုင်ရောက်ရန်ဆောင်ရွက်နေမှု၊ ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှန်းချက်များကို ရောက်ရှိရန်အတွက် ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
5. ပေးကမ်းခြင်းသည် ကောင်းမွန်သောအကျိုးဆက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်
ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပေါ်တွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လျှော့တွက်၍မရပါ။ ရက်ရောမှုသည် သစ္စာစောင့်သိမှုကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။ ဝန်ထမ်းများကို သင့်လျှော်သော Training ပေးရန်မမေ့ပါနဲ့။ သက်ဆိုင်သော နယ်ပယ်တွင် ကောင်းမွန်သောလေ့ကျင့်မှုများဖြင့် တိုးတက်မှု ရရှိစေနိုင်ပါသည်။